मण्डपमा थिए जन्ती, जग्गेमा थिए बेहुला–बेहुली, एउटा रोटीले तोडिदियो हुनै लागेको विवाह | Rajmarga
मण्डपमा थिए जन्ती, जग्गेमा थिए बेहुला–बेहुली, एउटा रोटीले तोडिदियो हुनै लागेको विवाह
एजेन्सी। के तपाइँले कुनै खाने कुराले हुनै लागेको बिहे तोडिदिएको सुन्नुभएको छ ? यदि छैन भने यो खबर तपाइँको लागि निकै रोचक हुनेछ । जन्ती मण्डपमा पुगेर बिहेको प्रक्रिया सुरु गर्ने लाग्दा एउटा डोसा (रोटी) को कारण बिहे नै तोडिएको छ । घटना भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुर जिल्लामा भएको हो ।
यहाँ बेहुलाकी भाउजुलाई डोसा यतिसम्म बेस्वादिलो लाग्यो कि उनले त्यो डोसा बेहुलीका काकाको मुखमै फालिदिइन् । जब बेहुलीका पिता र दाजुहरुले यो कुरा थाहा पाए मण्डपमै हंगामा मच्चियो । निकै हंगामा भएपछि बेहुली आफैंले बिहे गर्न अस्वीकार गरिन् । यद्यपि कसैले यसको प्रहरीमा रिपोर्ट भने गरेका छैनन् ।
कानपुरको कौरु गाउँमा प्रमोद कौशलकी छोरी प्रियंकाको विवाह हरदोइ गाउँका निरज नामका युवकसँग तय भएको थियो । अस्ति आइतबार हरदोइबाट जन्ती आएका थिए । जन्तीको स्वागतपछि विवाह प्रक्रिया सुरु भएको थियो । जन्तीले खाना खाँदै थिए । बेहुलाकी भाउजु पनि त्यहाँ बसेर डोसा खाँदै थिइन् । डोसाको स्वाद मिठो नलागेपछि भाउजुले हंगामा सुरु गरिन् । त्यसपछि बेहुलीका काकालाई बोलाएर गाली गर्दै उनको मुखैमा त्यही डोसाले हानिन् ।
बेहुलाकी भाउजुले त्यहीँ बेहुलीका काकालाई बेइज्जत गर्न थालिन् । यत्तिकैमा बेहुलीका काकाका छोरा, बेहुलीका पिता र दाजु पनि त्यहाँ पुगे । घटनाको जानकारी हुनासाथ दुवै पक्षबीच ठूलो विवाद भयो । विवाद यतिसम्म बढ्यो कि हात हालाहाल समेत भयो । यस क्रममा जसले जे भेट्यो त्यही उठाएर हिर्काउन थाले । केही समयमै बिहेको मण्डप कुस्तीको मैदानजस्तै भयो । निकै विवाद भएपछि बेहुलीले स्वयं विवाह गर्न अस्वीकार गरिन् । बेहुलीले ‘मेरो बाबा र काकाको इज्जतभन्दा ठूलो कोही छैन । यस्तो घरमा म बिहे गरेर जान्न’ भनेपछि जन्ती रित्तै फर्कियो ।
Previous post: सीधा र रमाइलो स्वभावका किम कसरी बन्नपुगे कठोर शासक ?
Next post: अछाममा दुई महिला मृत अवस्थमा भेटिए, हत्या कि आत्महत्या ?
जान्नुहोस् केटी भर्जिन रहेको कसरी थाहा पाउने ?
श्रीमती अन्तै सल्केको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् केही रहस्यमय जानकारी